Daawo Yaabka dhacay :Ninkii Mindida dadka ku dilay Hambrug oo Kuraas lala dhacay iyo Turki nolasha ku qabatay !! | Faafan News
Daawo Yaabka dhacay :Ninkii Mindida dadka ku dilay Hambrug oo Kuraas lala dhacay iyo Turki nolasha ku qabatay !!
Dad gaari watay ayaa Video qarsoon ka duubay qaabkii nolasha loogu qabtay Nin Mindida dadka ku dilay magaalada Hambrug , kaas oo ugu dambeeyntii si xun loo galay ka dib markii Kuraas iyo dhagaxaan lala dhaca.
Ninkaan ayaa Tooreey ku dilay 50 sano jir Jarmal ah wuxuuna dhaawac xun gaarsiiyay 7-Qof oo kale . Falkaan ayaana lagu sheegay mid Argagixiso ku lug leh in kastoo ninkaan oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta laga deyriyay xaaladiisa caafimaad .
Booliiska Germany ayaa shaaciyay in 3 Wiil oo Turki ah ay ka qeyb qaateen qaabkii nolasha loogu qabtay Ninkii dadka ku dilay Mindida maadaama ay la dhaceen Kuraas iyo dhagaxaan ka hor inta uusan baxsan , waxaana goobtii shilka uu ka dhacay si deg deg ah ku soo gaaray ciidamada Booliiska Jarmalka .